ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်းပေါ် ထောင်ထားသော ဒေသန္တရ လက်လုပ်မိုင်းနှစ်လုံး အချိန်မီ ရှင်းလင်းနိုင?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်းပေါ် ထောင်ထားသော ဒေသန္တရ လက်လုပ်မိုင်းနှစ်လုံး အချိန်မီ ရှင်းလင်းနိုင??
ရန်ကုန်-စစ်တွေကားလမ်းတွင် ဒေသန္တရလက်လုပ်မိုင်းနှစ်လုံး ထောင်ထားသည်ကို တွေ့ ရှိခဲ့သဖြင့် အချိန်မီရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၇ရက် နံနက် ၁၁နာရီခန့်တွင် မြောက်ဦးမြို့အဝင် ရန်ကုန်-စစ်တွေကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်-၁၁၃/၁ ဖာလုံကြားရှိ သံတံတား အမှတ်(၇/၁၁၂)၏ ထိပ်သံဘောင်အောက်၌ နှစ်ပင်လိမ်(နီ/နက်) ဝိုင်ယာကြိုးဖြင့် ဘက်ထရီအိုးကို သွယ်တန်းထားသော မသင်္ကာဖွယ်ရာမိုင်းဟု ယူဆရသည့် ပစ္စည်းနှစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှသိရသည်။
မိုင်းစတင်တွေ့ရှိသည့်အချိန်မှ စတင်၍ ရန်ကုန်-စစ်တွေကားလမ်းကို ယာယီပိတ်ပြီး တပ်မတော်မှ မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှစတင်ကာ ပြန်ဖွင့်ထား ကြောင်းသိရသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး အောင်မြတ်မိုးက ”မိုင်းတွေ့ပြီဆို ပြည်သူလူထုမထိခိုက်အောင် စည်းတားလိုက်ရတယ်။ မိုင်းကတော့ ဒေသန္တရ လက်လုပ်မိုင်းပါ။ မိုင်းနှစ်လုံးကတော့ တစ်ပုံစံတည်းပဲ။ ဟိုဘက်တစ်လုံး၊ ဒီဘက်တစ်လုံးထောင်ထားတာ။ ၁ဝ လက်မအကျယ်ရှိတဲ့ သံဘော်ဒီထဲမှာ ယမ်းထည့်ထားပြီးတော့ ဝိုင်ယာကြိုးနဲ့ စနက်တံသွယ်ထားတာ။ မိုင်းကိုတပ်မ တော်စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး တော့ အသက်မဲ့အောင် ပြုလုပ်ပြီးတော့ တပ်မတော်ကနေ ယူဆောင်သွားပါပြီ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် တပ်မတော်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ မိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးအတွက် ကျန်တံတားများကို မိုင်း ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် နေကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြောက်ဦး မြို့မရဲစခန်းတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြင့် အမှုဖွင့်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မိုင်းကို မည်သူမည် ဝါထောင်သွားသည့်အပေါ် စုံစမ်းစိ စစ်နေကြောင်း ¤င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။